DF oo shaacisay magacyada 41 jaamacadood oo la aqoonsan yahay - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) – Guddiga Tacliinta Sare ee Qaranka ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Soomaaliya ayaa maanta soo saaray liis ay ku aqoonsadeen 41 jaamacadood wasaaraddu.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ay ka gudbeen wajigii koowaad ee qiimeynta Gudiga ee Jaamacadaha dalka ee ka diiwaan gashan Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare.
“Jaamacadaha aan ku jirin liiskan waxay heli doonaan fursad labaad oo ay ku buuxiyaan waxyaabaha ka dhiman. Komishanku wuxuu dhawaan la xiriiri doonaa dhammaan jaamacadaha soo maray qiimeyntan,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Jaamacadaha ay soo bandhigtay wasaarada ayaa waxaa kamid ahaa jaamacadaha Simad, Muqdisho, Benaadir, Hormuud iyo jamaciyada Jamhuuriya.
Jaamacaddu sidoo kale waxay siisaa Camuud iyo Elo ee Somaliland, gaar ahaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Liiska cusub ee wasaaraddu soo saartay ee jaamacadaha la aqoonsan yahay ayaa yimid kadib markii ay xalay digniin u dirtay 20 jaamacadood oo ku yaal dalka.
Xalay ayaa war ka soo baxay Guddiga Tacliinta Sare ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta ee Soomaaliya waxaa loogu yeeray in ka badan 20 Jaamacadood oo ku yaal dalka, kuwaasoo lagu wargeliyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo xiriiraan guddiga si loo dhameystiro howlaha diiwaangelinta. Jaamacadda.
Sida ku xusan qoraalka guddiga, tani waxay ahayd fursadii ugu dambeysay ee jaamacadaha la isugu yeeray, maadaama afar jeer oo hore la wacay oo aysan imaan, sida lagu sheegay bayaanka guddiga.
“Waxaan ku wargalineynaa jaamacadaha magacyadooda liiska kujiraan in tani ay tahay fursadoodii ugu dambeysay ee ay sida ugu dhaqsaha badan ku yimaadaan xarunta guddiga sare ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada, dhaqanka iyo tacliinta sare DFS km5 Zoobe” ayaa lagu yiri qoraalka.
Liiska ay soo saareen Guddigu xalay ayaa waxaa ku jira magacyada 21 Jaamacadood oo ka howlgala Soomaaliya, kuwaasoo lagu wargeliyay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono haddii aysan la xiriirin Guddiga inta u dhexeysa 19-ka May iyo 5-ta May ee bisha Juun.
Hoos waxaa ku yaal liiska 41-ka jaamacadood ee wasaaraddu aqoonsatay iyo 21-ka kale ee la digay.
Abdiwahab Ahmed 3146 posts
TOBBANKA Xiddig Ee Ugu Koobabka Badan Yurub, Xiddiga Booska 1-aad La